iPhone OS4update is available now - MYSTERY ZILLION
iPhone OS4update is available now
June 2010 edited March 2011 in Tech News
iPhone OS4update is available now for iPhone and iPod Touch. Check it out.........
You need to update itunes to version 9.2 first before update your phone.:cool::cool::cool:
HELPING HANDS ARE BETTER THAN PRAYING LIPS......
still no jailbreak for iPodTouch 2G =(
PCWorld မှာ 10 Reasons to Upgrade ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။
1. Smart Folders
2. Wallpapers everywhere
3. E-mail improvements
5. SMS search & Character Count
6. iPod Playlist Creation & Editing
7. Orientation lock
9. Bluetooth keyboards support
multitasking, custom wallpaper, and Bluetooth keyboard support are available only with iPhone 4, iPhone 3GS, and the third-generation iPod touch (32GB and 64GB models from late 2009).
I'm using iPodTouch 2G not too much function for me.
iPhone4က micro sim support only လို့ပြောနေတယ်။စိတ်ညစ်တယ် အဲဒါဟုတ်လားဗျို့။
yes, iPhone4support micro sim. If you want to use normal sim, you can cut your sim card :P
ရက်စက်တယ် ကိုစေတန်ရေ ကတ်ကျေးနဲ့ ဖြတ်ပစ်ရမယ်တဲ့ (sim card ကို) ။တခုတော့ ရှိတယ် ဒီက sim card ကို micro sim ထဲကိုပွားရင်ရော ဖြစ်နိုင်လား နည်းရှိလားဟင်?။iPhone4ကိုကိုင်ချင်လွန်းလို့ ပိုက်ဆံကို အသဲအသန်စုနေတာ ခုတော့အိမ်မက်တွေရေစုန်မျှောဘီ။ဒါနဲ့ A4 processor ,512Mb ram နဲ့ iPod ရောထွက်လာနိုင်လား။အဲဒါဆို မဆိုးဘူး။ရှုပ်ပါတယ် iPhone4ဘဲ၀ယ်ပီး iPod လိုသုံးမယ် ။
micro sim ထဲကို ပွားပြီးသုံးရင်တော့ ရနိုင်တယ်ဗျ။ အဲဒီနည်းလမ်းက အဆင်ပြေဆုံးပဲ။ ဒါနဲ့ ဘာလို့ iPhone ဝယ်မှာလဲဟင်။ အင်တာနက် connection က နေရာတိုင်းမှာမှ မရတာ
ဒါနဲ့ ဘာလို့ iPhone ဝယ်မှာလဲဟင်။ အင်တာနက် connection က နေရာတိုင်းမှာမှ မရတာ
ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ခုလဲ လက်ရှိ iPhone ကိုင်နေတာ အဆင်ပြေနေတာဘဲ။ပြောမပြတတ်အောင်ကို ကြိုက်တယ်။iPhone ကိုင်ပီးဘယ်ဖုန်းမှ မကိုင်ချင်တော့ဘူး။App တွေကလဲ သူများနဲ့မတူဘူး၊game တွေကလဲ သူ့ကိုဘယ်သူမှမမီဘူး။ဒါနဲ့စကားမစပ် ကိုစေတန်ရဲ့ iPod touch 2G က MC model new bootrooms မဟုတ်ဘူးဆိုရင် JB ရတယ်နော်။
MC model ပါဗျာ.. jaiblreak က MC မဟုတ်တဲ့ဟာတွေပဲ ရတယ်..
Micro SIM မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကGSM Phoneတွေရောသုံးလို့မရတော့ဘူးလားဟင်????????
no micro sim, sorry.
What did you mean? I would like to know about iPhone4and it's SIM Card...
ကျနော်လဲ ကိုအောင်ကျောဇေယျ ကို မရှင်းလိုုပြန်မေးမယ် micro sim မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။iPhone4က Micro sim ဟုတ်နေလို့စိတ်ညစ်နေတာ။အကိုပြောသလို Micro Sim မဟုတ်ဘူး ဆိုရင် အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာမိမှာဘဲဗျာ။ဒါပေမယ့် ၀မ်းသာလို့မရတော့ပါဘူး။:frown:
သူမေးတာက လက်ရှိသုံးနေတာက MicroSim မဟုတ်ရင် သုံးမရတော့ဘူးလားတဲ့... သုံးလို့ရတဲ့ ၂ နည်းရှိတယ်။ ပွားတာနဲ့ ကပ်ကြေးနဲ့ ညှပ်တာ..
ကိုစေတန်ရေကတ်ကြေးနဲ့ ညှတ်တာက တကယ်ရောဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ဖြစ်နိုင်ရင် prepaid card ကိုစမ်းညှပ်ကြည့်ရမယ်။:cool:
အားပါးပါး ဒါဆို မြန်မာပြည်မှာ iphone4သုံးတဲ့သူမှန်သမျှ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေနဲ့လွတ်ကင်းပါ့မလား ???
Wiki မှာ ဖတ်ကြည့်မှ။ Micro sim နဲ့ Sim က data က နေရာ အတူတူပဲ။ Sim မှာကတော့ card ရဲ့ code နံပတ်ရေးဖို့ပါတယ်။ Micro sim မှာက မပါတော့တာပဲရှိတယ်။
ok သဘောပေါက်ဘီ data နေရာက တူတယ်မတူတာ အတိုမရှည်ဘဲ။သာမန် simcard က ICC ID ကို simcard ပေါ်မှာရေးထားတယ်။Micro sim ကတော့ အဲဒီနေရာတွေမပါဘူး။ဒါဆို ကတ်ကျေးနဲ့ညှတ်မယ်ဆိုဖြစ်နိုင်တာဘဲ Prepaid ကတ်ကိုအရင်ညှတ်မယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ညှပ်နည်း အတိအကျ ရှိရင် link ပေးပါလား။အင်း ယိုးဒယားက Dtac ကတ်ကိုအရင်ညှတ်ရင်ကောင်းမယ်တူတယ်။ဘတ် ၁၀၀ ဆိုတော့ ငါးကတ်လောက်ညှပ် ပီးမှဒီကတ် prepaid ကတ်ကိုညှပ်မှ ဒီက prepaid ကတ်ကစျေးကြီးတယ်။:cool:။MPT prepaid ကတ်ကိုညှတ်ပီး သုံးလို့အဆင်ပြေမှ ကတ်အစစ်ကို ညှတ်တာကောင်းမယ်။
ညှပ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲ ဟီးဟီး ညှပ်ပီးရင်လဲပြောအုန်း ရမရ
ညှပ်တာထက်စာရင် ပွားတာ ပိုမကောင်းဘူးလားဗျ... ညှပ်တာက နည်းနည်း အန္တရာယ်များတယ်နော်.. prepaid မဟုတ်တဲ့ MPT ကဒ်ကို သွားညှပ်လိုက်ရင် ပြဿနာ တက်နေအုံးမယ်..
50 တန်လည်းရှိပါတယ်ဗျ။ (DTAC ရော၊ AIS ရော) အဟိ
ယိုးဒယားက dtac ကတ်ကိုအရင်ညှတ်ရင်ကောင်းမယ်တူတယ်။ဘတ် ၁၀၀ ဆိုတော့ ငါးကတ်လောက်ညှပ် ပီးမှဒီကတ် prepaid ကတ်ကိုညှပ်မှ ဒီက prepaid ကတ်ကစျေးကြီးတယ်။:cool:။mpt prepaid ကတ်ကိုညှတ်ပီး သုံးလို့အဆင်ပြေမှ ကတ်အစစ်ကို ညှတ်တာကောင်းမယ်။
၅၀တန် လဲရှိပါတယ်အစ်ကို ပြည့်ဖြိုးအောင် ရ။ (dtac မှာရော aisမှာရော)။ အကုန်အကျသက်သာအောင်လို ့ပါ။ အဟိ
ကိုဇင် wrote: »
ပွားတာက ပို shock ရှိတယ်။Cutter နဲ့ ညှပ်မယ် ပီးရင် တခြားဖုန်းထဲထဲ့သုံးချင်ရင် Adapter နဲ့နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ပျော်စရာကြီး ။အောက်မှာပုံတွေတချက်ကြည့်လိုက် စုစုပေါင်းမှ မြန်မာငွေ ငါးသောင်းလောက်တောင်မကုန်ဘူး။
http://auction1.paipai.com/search/0/F370B01E0000000000733AAE074799CF-4876.htmlAttachment not found.Attachment not found.Attachment not found.Attachment not found.Attachment not found.Attachment not found.Attachment not found.Attachment not found.